यी हुन् का’गतीका बे’फाईदा! शे’यर गर्नुहोस्। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
यी हुन् का’गतीका बे’फाईदा! शे’यर गर्नुहोस्।
सामान्यतया हा’मीले का’गतीलाई गुणकारी फलका हिसावले बुझ्दै आएका छौँ । कागती सेवन स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभएर सौन्र्दयका लागि पनि निक्कै उ’पयोगी मानिन्छ । मनतातो पानीमा कागतीको रस निचोरेर खानाले हाम्रो शरीरलाई भि’टामिन सी तथा पोटासियम र फाइबर प्रचुर मात्रामा मिल्छ ।
तर, आज भने हामीले स्वास्थ्य र सौ’न्दर्यका हिसावले उपयोगी मानिएको र प्रयोग गर्दै आएको गु’णकारी फल कागतीका केहि अवगुणका बारेमा चर्चा गरौं ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा हा’मी कतिपयले हरेक दिन बिहान कागती पानीको सेवन गर्ने गरेका हुन सक्छौं । पे’टको बोसो क मगर्न तथा मोटोपना घटाउन का’गती पानीले सहयोग गर्छ । तर, नियमित रुपमा कागतीको रस सेवन गर्नाले पेटमा खबर गर्न सक्छ । कागतीमा एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ । हाम्रो पेटले त्यसलाई पचाउँन सक्दैन र पेट दुख्ने, उल्टि आउने सम्भावना हुन्छ ।
अर्को कुरा कागतीको रसले सिट्रस ए’सिड बढाउने हुँदा उक्त एसिडले दाँतमा अ’सर गर्छ । यदि तपाईंलाई कागती पानी पिउन छ भने सकभर स्ट्रले पिउने गर्नुहोस् । यसो गर्नाले कागती पानीले दाँतलाई छुन सक्दैन । अन्यथा दाँ’तमा तातो चिसो लाग्ने वा झन्झनाहट हुने समस्या हुन सक्छ ।
कागती पानी पिउनाले बारम्बार पि’साब आउने समस्या हुन्छ, जसले शरीरमा पानीको कमी हुन सक्छ र डि’हाइड्रेसन हुन्छ ।
कागती धेरै से’वन गर्नाले लगातार टाउको दु’ख्ने र माइग्रेनको समस्या पनि हुन सक्छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा एमिनो एसिड हुन्छ जसले हाम्रो दिमागमा रक्तप्रवाहलाई अचानक तेज बनाइदिन्छ । यसैकारण धेरै टाउको दुख्ने र माइग्रेन हुन सक्छ ।
कागतीमा अ’क्सलेट पनि हुन्छ, जुन धेरै सेवन गर्नाले शरीरमा गएर पत्थर बन्न सक्छ । यस्तो क्रि’स्टलाईज अक्सलेटले मिर्गौला र पित्ताशयको थैलीमा स्टोनको रुप लिन सक्छ ।
Previous खरेललाई कँ’डेलको सुझाव: ‘स’रकारी पेन्सन त्यागेर मात्रै सरकारको वि’रोध गर्नुस्’
Next मृ’गौला क’सरी स्वस्थ रा’ख्न सकिन्छ ? जानौं र स’क्दो शेयर गरौं ।